Daawo Madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo Xadhiga ka Jaray Casriyeyn Lagu Sameeyay Garoonka Kubadda Cagta Boorama | Wajaale.com
14 December 2016 | Featured / News
Daawo Madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo Xadhiga ka Jaray Casriyeyn Lagu Sameeyay Garoonka Kubadda Cagta Boorama
Boorama (GNN)- Madaxweyne ku xigeenka Somaliland C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), oo safar shaqo ku jooga magaaladda Boorama ayaa maanta kormeer ku soo maray meello ka mid ah magaaladda oo ay ka socdaan mashaariic horumarineed.Waxaanu madaxweyne ku xigeenku soo indho-indheeyay goobo dhawr ah oo ay dawladu dhismeyaal ka wado, isagoo xadhiga ka jaray garaanka kubadda cagta ee Xaaji Daahir Stadium ee Boorame oo dib u dhis iyo casriyayn lagu sameeyay. Garoonkaasi oo ay dhismihiisa iska kaashadeen xukuumadda dhexe ee Somaliland iyo dawladda hoose ee Boorama.
Madaxweyne ku xigeenka oo ay kormeerkiisa ku wehelinayeen badhasaabka gobolka Awdal, maayarka degamadda Boorama iyo xubno ka mid ah xildhibaanadda golaha degaanka Boorama ayaa markii uu tegay goobta uu ka socdo dhismaha garoonka kubbadda cagta Boorama, waxaa uu halkaasi warbixin kaga dhegaystay guddoomiyaha gudiga dhismaha garoonka Axmed Xaaji Daahir Cilmi.
Madaxweyne ku xigeenka oo hadal ka jeediyay garoonka Xaaji Daahir Stadium ee uu xadhiga ka jaray ayaa tilmaamay in garoonkaasi uu ahaa mid ay baahi weyn u qabeen dhalinyaradda xiiseeya ciyaaraha ee reer Boorama. Waxaanu yidhi “Waxaa loo baahan yahay sidii uu garoonkani uu u noqon lahaa garoon qiimo leh, oo dhalinyaradda soo jiita ama dhiiri geliya dadka ku ciyaari doona. Waxaan dhawaan soo bandhigi doonaa, garoonkii hore ee Boorama sidii uu ahaan jiray iyo faraqa u dhexeeya garoonkan cusub ee Xaaji Daahir Stadium”.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in ay xukuumadda ka go’an tahay hirgelinta goobaha ay dhalinyaradu ku ciyaaraan sida garoomadda, waxaanu kula dar-daarmay dhalinyaradda in ay ciyaaraha isku tacalujiyaan si ay uga soo baxaan laacibiin ama ciyaar yahano heer caalami ah. Isagoo xusay in ay ku dedaalayaan in ay magaalooyinka ka sameeyaan naadiyo ciyaaraha ah.
“Dhalinyaradda waxaa looga baahan yahay in ay ciyaaraha isku tacalujiyaan, anaga-na (xukuumadda) waxaan naga go’an in aanu goobihii lagu ciyaari lahaa idiin samayno, kadib-na ay idinka soo baxaan ciyaartooyo caan ah, sida raggaa magacoodu cirka maray ee Mara Dona iyo Messi oo kale ah.
Naadiyo ama kooxo ciyaara kubbadda cagta ayaynu samayn doonaa mustaqbalka, tartanka ciyaaraha goboladda uun in la sugo ma aha, waxaa loo baahan yahay in naadiyo isku dhex jira oo Somaliland ay leedahay la sameeyo, oo ay naadiyadaasi goboladda dalka min Bari ilaa Galbeed ay ku soo wada ciyaaraan, si ay u abuurto is-dhex gal dhinaca dhalinyaradda ah” ayuu yidhi madaxweyne ku xigeenka Somaliland.
Guddoomiyaha gudiga dhismaha dhismaha garoonka casriga ah ee Boorama Axmed Xaaji Daahir, oo ka warbixinayay-na dhismaha garoonka iyo cida ka qayb qaadatay hirgelintiisa ayaa sheegay in ay jiraan waxyaabo badan oo weli qabyo ka ah garoonkaasi, isla markaana loo baahan yahay in wax laga qabto.
Axmed Xaaji Daahir, waxa uu yidhi “Waxba kama jiraan ayuu noqonayaa garoonku haddii aan biyaha laga leexinin, waayo madaxweyne ku xigeen meeshan garoonka laga dhisay waa meeshii ay biyuhu isugu imanayeen ama ay marayeen. Muddo 4 bilood ah waxaanu sugaynay intii uu roobku joogsan lahaa, ee aanu biyaha ka farsamayn lahayn, imika-na farsamooyin badan ayaa weli u dhiman oo ay ka mid tahay in biyaha laga leexiyo, shebeg in lagu sameeyo oo la qurxiyo ayuu u baahan yahay garoonkani”.
Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay maayarka magaaladda Boorama Maxamed Xuseen Maydhane, ayaa sheegay in dhismaha garoonkaasi ay iska kaashadeen xukuumadda dhexe ee Somaliland iyo dawladda hoose ee Boorama oo bilawgii dhismaha garoonkaasi bixiyay $180,000 dollar, iyadoo ay sidoo kale dhalinyaradda gobolkuna ka qayb qaateen.
Maayar Maydhane, ayaa ugu baaqay ganacsatadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshadda gobolka Awdal in ay ka qayb qaataan dhamays tirka garoonkaasi. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa “Dhismaha garoonkani waxaa markii hore gashay lacag dhan $180, 000 (boqol iyo sideetan kun oo dollar) oo golaha degaanka Boorama ay bixiyeen.
Imikana dawladda dhexe ayaa bixinaysa lacagta Roogga la dhigayo garoonka, dhalinayraduna way dedaashay oo waxay sanadkan keeneen $2000 dollar (laba kun oo dollar). Markaa waxaan uga baahanahay dadweynaha magaaladda Boorama in ay ku darsadaan qaybtoodda, mar haddii dawladda hoose iyo dawladda dhexe-ba ay iska kaashadeen dhismaha garoonka” ayuu yidhi maayarka Boorama.
Badhasaabka gobolka Awdal Musatafe Cabdi Ciise (mustafe-shiine) oo isna goobtaasi ka hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay in lacagta lagu soo iibiyay Roogga la dhigayo garoonka Xaaji Daahir Stadium ee Boorama ay bixisay wasaaradda Maaliyadda. Waxaanu yidhi “Waxaa jirta in garoonkan Xaaji Daahir Stadium ay maalin walba quruxi ku sii kordhayso, iyadoo markii hore sida uu maayarku sheegay dhismaha gidaarka iyo qaybaha kale lacagta ku baxday ay bixisay dawladda hoose ee Boorama. Waxaana imika garoonka la dhigayaa Rooggii, roogaasi garoonka la dhigayo kharashkiisa waxaa bixisay wasaaradda Maaliyadda.”